कसरी परिवार साझा प्रयोग गरेर एक बच्चा को लागी एक एप्पल खाता बनाउने आईफोन समाचार
कसरी परिवार साझा प्रयोग गरेर एक बच्चा को लागी एक एप्पल खाता बनाउने
आईप्याड सम्पूर्ण परिवारको लागि एक उपकरण हो, र बच्चाहरू हुर्कुन्जेल उनीहरूले शैक्षिक उपकरणको रूपमा सामग्रीको पहुँच गर्न सुरू गर्दछ जुन परम्परागत स्कूल पुस्तकहरूको पूरक हुन्छ। घरमा हामी कम्तिमा एउटा बिन्दुमा पुगेका छौं जहाँ आईप्याड पहिले नै घरका साना बच्चाहरूको सम्पत्ति हो, र तपाईंको आईक्लाउड खाता यसमा कन्फिगर गरिएको हुनु पहिले नै अव्यावहारिक, खतरनाक पनि हो। एप्पलले १ 14 बर्ष भन्दा मुनिका बच्चाहरूलाई स्वतन्त्र खाताहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिँदैन, तर यसले तिनीहरूलाई "परिवार" विकल्प भित्र अनुमति दिन्छ।। कसरी एउटा बच्चा खाता सिर्जना गर्न सकिन्छ? यो गरेर के फाइदा हुन्छन्? डाउनलोड गरिएका अनुप्रयोगहरूलाई तपाईं कसरी नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ? हामी तपाईंलाई यी सबै तल देखाउँदै छौं।
1 बच्चाको लागि खाता किन सिर्जना गर्ने?
2 कसरी बच्चाको लागि एप्पल खाता सिर्जना गर्ने?
3 परिवारको फाइदा
बच्चाको लागि खाता किन सिर्जना गर्ने?
तपाईंको आफ्नै सुरक्षाको लागि सबै माथि। यो नबिर्सनुहोस् कि तपाईका सबै डेटा, सम्पर्कहरू, क्यालेन्डरहरू, मेल, आदि। आईक्लाउडमा भण्डारण गरिएका छन्। एक बच्चाको पहुँच भित्र सबै राख्नको लागि सिफारिश गरिदैन किनकि यसले विनाश ल्याउन सक्छ। आईक्लाउड जडित उपकरणमा तपाईले गर्नु भएका परिवर्तनहरू सिधा सिधै तपाइँका सबै उपकरणहरू समन्वयन हुन्छन्, यदि तपाइँ गल्तिले सम्पर्क मेटाउनुहुन्छ भने, तपाइँ तुरून्त यसलाई तपाइँको सबै यन्त्रहरूमा हराउनुहुनेछ, र तपाइँलाई यो पनि थाहा हुँदैन।
तर यो «भविष्यमा लगानी is पनि हो, किनकि तपाईंको बच्चाले आफ्नो खातामा भण्डारण गरेको आफ्नै डाटाको साथ आफैलाई बनाउन सक्षम हुनेछ। तपाईंको सफारी मनपर्नेहरू, तपाईंको शिक्षकको ईमेल खाता, खेल केन्द्रमा तपाईंको खेलहरू। उसले तपाईंको क्लेश अफ क्लेन्सको खेल प्रयोग गरेर किन खेल्नु पर्छ? अब उसको आफ्नै गाउँ छ र त्यसरी उसले कुनै चीज लुट्ने छैन, उसले तिमीलाई लडाईमा पनि हराउन सक्छ।
कसरी बच्चाको लागि एप्पल खाता सिर्जना गर्ने?
पहिलो कुरा भनेको परिवार खाता बनाउनु हो। त्यो खातामा, एक व्यक्ति एक हो जसले सबै कुराको आयोजन गर्छ, र क्रेडिट कार्ड राख्ने एक हो। बाँकी थपिएका खाताहरू छन् जुन भुक्तानी विधि साझा गर्दछ, र जुन प्रतिबन्धित गर्न सकिन्छ, तर हामी त्यसलाई पछि हेर्नेछौं। अब हामी कसरी परिवारको खातामा बच्चा थप्ने भनेर हेर्ने छौं। यो गर्नका लागि तपाईले सेटिंग्स> आईक्लाउड पहुँच गर्नुपर्नेछ र तपाईको खाताको ठीक तल "ईन परिवार" मा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग पहिले नै सदस्य छ भने, यो त्यहाँ देखा पर्नेछ, नता तपाईंसँग कोही छ, तपाईं जसलाई चाहानुहुन्छ थप्न सक्नुहुन्छ:
यो घटनामा कि यो एक एप्पल खाताको साथ पहिले नै कन्फिगर गरिएको छ, तपाईं केवल तिनीहरूलाई तिनीहरूको ईमेल प्रयोग गरेर आमन्त्रित गर्नुपर्नेछ, जो तिनीहरूको खातासँग सम्बन्धित छ। यदि तपाईंले निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुभयो भने यो तपाईंको पारिवारिक खातामा पहिले नै हुनेछ।
यदि तपाईंसँग खाता छैन, र तपाईं पनि नाबालिग नै हुनुहुन्छ (हाम्रो उदाहरण), तपाईंले यसलाई स्क्र्याचबाट सिर्जना गर्नुपर्नेछ, जसको लागि हामीले आईक्लाउड ईमेल खाता सिर्जना गर्नुपर्नेछ र नाबालिगको उमेरलाई संकेत गर्नुपर्नेछ।
यस कन्फिगरेसनमा दुई महत्त्वपूर्ण विवरणहरू: तपाईं कन्फिगर गर्नु पर्छ कि नाबालिगले कसलाई खरिद गर्न सक्दछन् र को सक्दैन। जसले तिनीहरूलाई अधिकार दिन सक्दछन् «अभिभावक / अभिभावक be, अन्यहरू केवल« वयस्क be हुनेछन्। यो गर्न, परिवारको प्रत्येक सदस्य प्रविष्ट गर्नुहोस् र "अभिभावक / अभिभावक" बटन सक्रिय वा निस्क्रिय गर्नुहोस्। खातावाला सधैं एक अभिभावक / अभिभावक हुनेछ। अर्को विवरण जुन पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि हामी नाबालिगहरूलाई खरीदहरू अनुरोध गर्न सक्षम बनाउन चाहन्छौं कि चाहँदैनौं। सकारात्मक मामलामा (बटन सक्रिय) तिनीहरू अनुप्रयोगहरू किन्न सक्षम हुनेछ, नि: शुल्क वा भुक्तान, तर अभिभावक वा अभिभावकको प्राधिकरणको आवश्यक हुनेछ। सबै भन्दा राम्रो कुरा यो छ कि तपाइँ तलको भिडियो हेर्नुहुन्छ यसले कसरी काम गर्दछ देख्न।
सदस्यहरू तपाईंको ए एन फेमिलिया खातामा थप्नको मतलब यो हो कि तिनीहरू सबै आफ्नो उपकरणमा उनीहरूको आफ्नै एप्पल र आईक्लाउड खाता कन्फिगर गर्न सक्षम हुनेछन्, डाटाको साथ, तर मालिकको खरीदहरू साझेदारी गर्न सक्षम हुनेछ। त्यो हो, यदि तपाईंले एक अनुप्रयोग किन्नु भएको छ भने तपाईंले फेरि डाउनलोड गर्दा यसको भुक्तानी गर्नुपर्दैन। तिनीहरू पनि एप्पल संगीत परिवार खाता प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछ, र € 15 प्रति महिना आफ्नो परिवार खाता को सदस्यहरु एप्पल को संगीत सेवा आनन्द लिन को लागी सक्षम हुनेछ। अब तपाईंले शान्त हुनको लागि आफ्नो आईप्याडको उमेर प्रतिबन्धहरू मात्र समायोजित गर्नुपर्नेछ र तपाईंलाई थाँहा छ कि उनीहरू आफ्नो उमेरका लागि उपयुक्त नभएका चीजहरूको उपयोग गर्दैनन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » एप्पल उत्पादनहरू » iCloud » कसरी परिवार साझा प्रयोग गरेर एक बच्चा को लागी एक एप्पल खाता बनाउने
जोस एन्टोनियो ल्लोर्का सान्चेज भन्यो
म कसरी परिवार सेयरिंगबाट एक सदस्य हटाउन सक्छु? मैले एउटा नराम्रो सिर्जना गरेको छु र यसलाई हटाउन आवश्यक छ। धन्यबाद।
जोस एन्टोनियो लोर्का सान्चेजलाई जवाफ दिनुहोस्
उही कन्फिगरेसन मेनूबाट तपाईं तिनीहरूलाई मेटाउन सक्नुहुन्छ।
के तपाईं आईफोन ११ को साथ आईफोन on मा बच्चाहरूको खाता बनाउन सक्नुहुन्छ?
किनकि म र मेरी छोरीले उनको जन्म मिति राखे तर, यो अर्को बाहिर आउँदैन ...
म यो कसरी विश्वास गर्न सक्छु?
यदि तपाइँ यो गर्न सक्षम हुनुपर्दछ, हुनसक्छ यो केहि विफलता हो। केहि घण्टा पछि प्रयास गर्नुहोस्।
नाइट शिफ्ट अब उप्रान्त बचत मोडमा सिरीको साथ सक्रिय हुन सक्दैन
पेबलले आईफोनबाट सन्देशहरूको जवाफ दिन भेरिजन मार्फत पहिले नै अनुमति दिन्छ